Maalinta: Abriil 22, 2017
Marka Kulanka Tea Festival 2017
taas oo ah waddanka uu ugu shaah ku baabba'saday adduunka Turkey ah, uu helo iid u qalantay. 29-30 1, oo ka dhici doona Xarunta tareenka ee Haydarpaşa inta u dhexeysa Abriil. Bandhigga Caalamiga ah ee Shaaha Istanbul waa mid heersare ah [More ...]
23 Farriin ka timid Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaadhsiinta
Farriinta 23 ee Abril ka timid Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta [More ...]
Kulanka Xarunta Sayniska ee Tekirdağ
Shirka Xarunta Adeegga ayaa lagu qabtay Tekirdağ: Kulan wada tashi ah ayaa lagu qabtay 'Xarunta Saadka' ee la qorsheeyay in lagu qabto degmada Süleymanpaşa. Duqa Magaalada Dawlada Hoose ee Magaalada Kadir Albayrak, Duqa Magaalada Süleymanpaşa Ekrem Eşkinat, [More ...]
MOTAŞ waxay qabataa adeegga gaadiidka dadwaynaha oo leh feejignaanta farshaxanka
MOTAŞ waxay fulisaa adeega gaadiidka dadweynaha iyadoo la tixraacayo farshaxanka: Degmada Malatya ee Magaalo Weynta Marka loo eego natiijooyinka sahaminta qancinta macaamiisha ee ay sameeyeen MOTAŞ, urur cilmi baaris madax banaan, 10 oo ay la socdaan kumanaan dad ah, gaadiidka dadweynaha ee Malatya [More ...]
Xarunta wareejinta Bursa Kestel waxay furantahay: Sida ku xusan bayaan ay soo saartay BURULAŞ; Xarunta Bedelka Kestel 22 ayaa la furay Sabtidii (berri). D13, D13 / A qandaraas hoos imanaya BURULAŞ oo u adeegaya saldhiga Arabayatağı, [More ...]
Maanta taariikhda: 22 April 1924 Xeerka Golaha 506 ee XNUMX ...